मन्त्रीको भागबण्डा टुंगियो, कुन दलको भागमा कति ? – kalikadainik.com
मन्त्रीको भागबण्डा टुंगियो, कुन दलको भागमा कति ?
बुधबार, आश्विन ०६, २०७८ | २०:४१:३० |
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पाँचवटा मन्त्री पाउने भएको छ । आज भएको सर्वदलीय बैठकमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाउँदै नेपालको पार्टीलाई पाँच मन्त्री र एक राज्य मन्त्री दिने सहमती भएको हो ।
सरकारलाई साघाउन बनेका कार्यदलले गरेको प्रस्तावलाई नै सामान्य हेरफेर गरेर गठबन्धनको बैठकले अन्तिम रुप दिएको छ । जसअनुसार माओवादीलाई छ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीलाई चार जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने सहमती भएको छ । काँग्रेसले सातवटा मन्त्रालय लिने सहमती छ ।काँग्रेस भित्र रामचन्द्र पौडेल समुहले वितण्डा गरेर देउवालाई रोक्न सकेन भने भोली साँझसम्ममा नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ गराउने तयारी छ । तर काँग्रेसभित्रको किचलोले मन्त्रिपरिषदको भविष्य निर्धारण हुने बताइएको छ ।
मन्त्रीको बिषयलाई लिएर कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक रुपमै आपत्ति जनाइसक्नु भएको छ । देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्ट पौडेलले आज पनि काँग्रेस पदाधिकारी बैठकमा कुरा राख्दा देउवा झाक्किदै बैठकबाट उठेर हिड्नु भएको छ ।